Mitsabo Ny Fifandraisan’i Japana Sy Shina · Global Voices teny Malagasy
Mitsabo Ny Fifandraisan'i Japana Sy Shina	Voadika ny 08 Novambra 2012 22:14 GMT
Zarao: Noraisin'i Japana ho fananam-pireneny [ja] ireo Nosy Senkaku (fanamarihana: ho an'i Shina indray dia Nosy Daiyo no iantsoany azy ireo) tamin'ny 11 Septambra 2012, nahatonga hetsi-panoherana fankahalàna an'i Japana tany Shina. Ireny hetsi-panoherana ireny sy ny fanehoan-kevitra tany aloha avy amin'ireo Japone mpikirakira aterineto dia voatanisa ao anatin'ny lahatsoratray teo aloha [ja].
Ny fifandroritana ofisialy misy amin'ny firenena roa tonta dia mihizina nanomboka tamin'ny Oktobra lasa teo. Raha miady amin'izay hampivoarana ny fifandraisana ny governemanta roa tonta, eny amin'ny sehatry ny fiarahamonina sivily no tsikaritra ny sasany amin'ireo fahombiazana.
Yokodo-Syujin, bilaogera, dia mijery ireo ezaka marobe notarihan'ny mpanoratra avy amin'ny firenena roa tonta, izay manantena ny hitsabo ilay fifandraisana. Ao amin'ny lahatsorany [ja] tamin'ny 12 Oktobra izy dia miteny an'i Mo Yan ilay nahazo ny Loka Nobel:
Ny fandresen'i Mo Yan dia marika fa mihatsara ny fifandraisan'i Japana-Shina
Ilay Shinoa mpanoratra, Mo Yan, no nahazo ny Loka Nobel momba ny Literatiora. Ilay Japoney mpanoratra, Haruki Murakami, no nosaintsainina ho toy ny handresy tamin'izany, nefa dia azo lazaina fa ny loka ho an'ny literatiora dia “fifanandrinan'i Japana sy Shina”, ny vokatra dia nanome fandresena ho an'i Shina. Faly ny vahoaka Shinoa, saingy indro fifantenana ny fivoaran-draharaha mahaliana.
Ireo Liberaly ao Shina dia lazaina fa mpanakiana an'Atoa Mo Yan, saingy tsy azo ihodivirana izany eo ambany rafitra Antoko Kaomionista. Namoritra an'Atoa Liu Xiaobo sy ny hetsiny amin'ny kabariny ireo manampahefana, nahazo ny Loka Nobel momba ny Fandriampahalena roa taona lasa izao i Mr.Liu tamin'ny 2010. Noho izany, fantatsika tsara fa tsy misy toerana ho an'ny fanakianana rafitra izany raha tsy hoe angaha ianao tonga miaraka aminà fomba fanao tena mbola vaovao tsy nisy nahita mihitsy.
Tsapako ao anatin'ny nisafidianana an'i Mo Yan hahazo ny Loka Nobel amin'ny Literatiora, fa nararaotin'ny Kaomity mpifantina ny Nobel ity fotoana ity hitsaboana ny fifandraisana eo amin'i Japana sy Shina. Atoa Mo Yan dia malaza ho mpitia an'i Japana. Raha Atoa Murakami kosa no nahazo ny loka, mety ho niharatsy ny fifandraisana eo amin'ny firenena roa tonta, indrindra indrindra taorian'ny nahazoan'i Shinya Yamanaka ny loka Nobel. Ny Loka Nobel dia tohanan'ny antony iray ara-politika hatrany.
Miresaka an'i Professora Cui Weiping ihany koa izy, izay nanao antso tamin'ny aterineto mba hanatsaràna ny fifandraisana, izay voatanisa ihany koa tanaty lahatsoratra iray tao amin'ny gazety Japoney Asahi Shimbun [ja].
Araka ilay lahatsorara dia hetsika sivily tao Japana no nanosika an'Atoa Mo Yan hanao antso ho fanangonan-tsonia [zh] mba hahamatotra ilay fomba fijery momba ireo fifandraisana.
Vondron'olon-tsotra no nikarakara ilay hetsika teo ambanin'ny teny faneva hoe “Atsaharo ny Ady Tany Tsy Misy Farany.” Araka ny ambaran'ilay vondrona [ja] dia olona 1600 ka isan'izany ilay mpanoratra nahazo ny Loka Nobel momba ny Literatiora tamin'ny 1994, Kenzaburo Oe, no naneho ny fanohanany.
Ao amin'ny tranonkalan'ilay hetsika, dia ambara fa manan-danja tokoa ny firaisankina manerantany sy hetsika toy ny an'Atoa Mo Yan izay “zava-dehibe”, ary ny “hetsika sivily hitadiavana fandriampahalemana sy fiaraha-miaina mihoatra lavitra ny sisintany.”
Etsy ankilany ny MSN Sankei News nitatitra fa hoe ny teny faneva dia hoe [ja] “fankahalàna an'i Japana” ary marobe no nanakiana [ja] an'Atoa Oe sy ilay vondrona sivily.
Olon-tsotra mifamory eno ambanin'nyteny faneva hoe “Atsaharo Ny Ady Tany Tsy Misy Farany sady avelao ny vahoakan'i Azia hanomboka firaisankina tsy ho amin'ny ady fa ho amin'ny vahaolana ampilaminana”. Sary avy amin'ny Labornet Japan. 18 Oktobra 2012. (fampiasàna nahazo alàlana)
Raha nitatra ireo hetsi-panoherana mankahala an'i Japana, ilay bilaogera Yokodo-shujin [ja] kosa nanoratra tsy tapaka nandritra ny volana iray mikasika ny ahiahiny amin'ny fiharatsian'ny fifandraisan'i Japana sy Shina.
Ny 17 Septambra, nanoratra lahatsoratra iray izy, mitondra lohateny hoe “ny votoatin'ny korontana anatin'ny hetsi-panoherana iray fankahalaàna an'i Japana dia resaka ady fitondràna” [ja]. Ny 18 Septambra izy dia nanoratra hoe, “ny ankamaroan'ny Shinoa no mahita dian-tànan'i Etazonia avy ao ambadik'io” [ja] ary manao sosokevitra ny amin'ny hoe iza no hahita tombontsoa amin'ilay fifandirana. Ary ny andro manaraka, nanoratra izy hoe “lalaovina sy zimbazimbaina ny vahoakan'ny firenena roa tonta” [ja] mitandrema amin'ny fiakaran'ny maripàna. Mitohy hatrany manoratra izay tonga ao an-tsainy ao anatin'ny bilaoginy izy.
Tena mba mampitombo fahalàlana ity tolo-kevitra ity. Na ny governemantan'i Japana na ny an'i Shina dia tokony samy hihaino ny feon'ny vahoaka tonga saina.
Ireo olona nanao sonia ilay fanangonan-tsonia tamin'ny tena anarany dia tena feno fahasahiana tokoa. Ireo olona toa an'i Cui Weiping no tena maneho tsara ny fo mitepo ao Shina. Isika Japoney tokony hiasa miaraka amin'ireo olona ireo mba hiroborobo miaraka.
Mitohy mitombo hatrany ny tsirinà fifanakalozan-dresaka eo amin'ny tany roa tonta.
Ity lahatsoratra ity dia manasongadina ny bilaogy Yokodo-shujin rehefa nahazo alàlana.
Zarao: twitter facebook reddit googleplusEmail endriny atao pirinty MpanoratraMari Wakimoto
Translated (en) byKeiko Tanaka
Vakio amin'ny teny English, Italiano, Español, 日本語
Fahalalahàna mitenyFanoheranaFifandraisana iraisam-pirenenaFitantanam-pitondranaFoko sy FiavianaHafanàm-po an-tseraseraHaisoratraHevitraMediam-bahoakaPolitikaToekarena sy FandraharahànaZon'olombelona